HomeWararka Ciyaaraha MaantaXidigaha Manchester United oo Codsi u jeediyay Xidigooda Paul Pogba dhanka Mustaqbalkiisa
April 11, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Ciyaartoyda Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay u arkaan Paul Pogba inuu yahay ‘kabtan’ kooxda, waxaana ay si aad ah u doonayaan ciyaaryahanka khadka dhexe inuu saxiixo qandaraas cusub oo waqti dheer ah iyagoo codsigaasi u jeediyay.
28 jirkaan qandaraaskiisa haatan ee Old Trafford ayaa dhacaya xagaaga soo socda, taasoo la micno ah in la iibin karo inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan, iyadoo Juventus loo maleynayo inay hogaamineyso loolanka loogu jiro saxiixiisa.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay The Sun , saaxiibada Pogba way ‘xumaan lahaayeen’ haddii xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska uu ka tago kooxda ka hor xilli ciyaareedka soo socda.
Laacibka ku guuleystay Koobka Adduunka ayaa la dhibtoonayay dhaawacyo canqowga iyo muruqa ah xilli ciyaareedkan laakiin weli wuxuu u saftay 32 kulan tartamada oo dhan, isagoo ka qayb qaatay shan gool iyo afar caawin intii lagu gudajiray.
Pogba ayaa markii hore ka tagay Man United kuna biiray Juve sanadkii 2012 ka hor inta uuna ku laaban Old Trafford sanadkii 2016.
Real Madrid ayaa sidoo kale loo maleynayaa inay xiiseyneyso muddo dheer ciyaaryahanka khadka dhexe, laakiin warbixin dhowaan soo baxday ayaa sheegtay in loo isticmaali karo qeyb ka mid ah heshiis is dhaafsiga ah ee weeraryahanka Old Lady Paulo Dybala .